Kunayo Ziyamangalisa Izinqaba eJalimane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Kunayo Ziyamangalisa Izinqaba eJalimane
Germany ngokwemvelo izwe elihle. Kodwa lapho uqala ukucabanga mayelana izinqaba, uzongithanda it nakakhulu. Futhi konke lokho ngoba Germany, mayelana nokuthi zinengi, inhlokodolobha enqabeni wonke.
Kukhona lonke zaziziningi izinqaba okumangalisayo eJalimane udinga ukuvakashela. Kulesi sihloko, sizobe ukugxila kuphela labo elihle kakhulu phakathi kwabo. Sizophinde akunike ulwazi sendlela unga ukubafinyelela ngesitimela, kuya kujabule bonke abathandi isitimela!
Schloss Neuschwanstein - Kunayo Ziyamangalisa Castle eJalimane
Abaningi bazi ukuthi njengoba omunye izinqaba amahle kakhulu emhlabeni wonke, hhayi nje eJalimane. Uma kungenjalo ukuthi, kungcono impela abadumile ngokuba sasikhuthaza ngenxa Disney Castle. Uma sibheke lokhu inganekwane castle, uyaqaphela ukuthi kungani. Ungakwazi Ngokuqinisekile siqonde ukuthi kungani iphakathi izinqaba emangalisa kakhulu eJalimane!
Schloss Neuschwanstein ngokungangabazeki ngokubabazekayo, kodwa uthola ukuthi kukhona? Into enhle mayelana Germany wukuthi izindawo eziningi ukuxhuma nge isitimela. I abaseduze sesitimela enqabeni ungaphakathi Fussen. Nokho, ungakwazi ukufinyelela ukuthi esiteshini kusuka Munich noma yimuphi omunye emadolobheni amakhulu German.
Hohenzollern - Kunayo yemilingo Castle eJalimane
castle Hohenzollern akuyona nje kuphela phakathi izinqaba emangalisa kakhulu eJalimane - kungcono kakhulu imilingo eyodwa. Ungayithola ku esifundazweni Baden-Württemberg, eduze Stuttgart. isifundazwe Baden-Württemberg kunazo Underrated omunye eJalimane, kodwa uma ubona lokhu castle, awunakukugwema ukushintsha umbono wakho!
Nokho, kokuthola enqabeni kungaba inkinga, siqala kuwufanele ngokuphelele. Indlela engcono kakhulu iwukuba sithathe isitimela esuka Stuttgart ukuba Hechingen. Khona-ke udinga ukuthatha ukushaywa eside futhi igquma emaweni ukufinyelela enqabeni. Mina ngiyingane yini lo muntu nje! Ungakwazi ukuthatha ibhasi Shuttle noma itekisi esuka Hechingen le nqaba liseduze impela edolobheni.
Hohenzollern Sigmaringen - esibaluleke Castle eJalimane
Ngokubona kwethu ethobekile, kungekho uhlu izinqaba emangalisa kakhulu eJalimane kungaba ephelele ngaphandle kokukhuluma Hohenzollern Sigmaringen. Kuyinto enqabeni enkulu futhi azenza oyoze walala amehlo akho! Futhi uma lokho akwanele, kungcono futhi ngokupheleleyo obumangalisayo.
Ngakho Hohenzollern-Sigmaringen ungaphakathi Baden-Württemberg; ngakho kungcono Okumangaza ngokuphelele ukuthi kungani abantu bedumisa sifundazwe njengoba omunye kakhulu amahle eJalimane!
Njengoba for kokuhamba - kusukela ungathola enqabeni edolobheni, kungcono kalula ngesitimela. Indlela engcono kakhulu iwukuba sithathe isitimela esuka Ulm noma Stuttgart bese ukuhamba enqabeni.
Frankfurt ukuze Ulm Izitimela
Stuttgart ukuze Ulm Izitimela
Leipzig ukuze Ulm Izitimela
ENuremberg ukuze Ulm Izitimela
Le nqaba imele wodwa egqumeni elincane, futhi kubukeka ngempela umbukwane. Nokho, akusiwona enesizungu uma acabangele ukuthi namanje owakhiwe! Yebo, the Eltz umndeni uye wabambelela enqabeni ngoba 33 izizukulwane!
Lapho kuziwa enqubekeleni khona, kuzodingeka ukuba uhambe noma uthole ibhasi noma itekisi esuka Hatzenport. Nokho, kungenzeka ngempela ukuthola edolobhaneni ngesitimela Koblenz - ngumuzi oseduze enkulu.
Frankfurt ukuze Hatzenport Izitimela
Bonn ukuze Hatzenport Izitimela
Cologne ukuze Hatzenport Izitimela
Dusseldorf ukuze Hatzenport Izitimela
Ngakho khona unayo it, uhlu oluphelele izinqaba emangalisa kakhulu eJalimane. Sithemba ukuthi uzoba uvakashele okungenani omunye wabo ohambweni lwakho olulandelayo! Uma ufuna ukwazi kabanzi mayelana ehamba ngesitimela zale izinqaba, ukhululeke Xhumana nathi nganoma isiphi isikhathi.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-spectacular-castles-germany%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#deutschland Izinqaba europetravel trainjourney Tranride amathiphu isitimela Izikhangibavakashi travelgermany